कालीञ्चोकमा केबुलकार सञ्चालन ! कालीञ्चोकमा केबुलकारमा यात्रा गरेको कति पर्छ थाहा पाइराख्नुस् !
कार्तिक १७, २०७५ बिगुल
जिरी, दोलखाको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र कालीञ्चोकमा आइतबारबाट व्यावसायिक रुपमा केवलकार सञ्चालनमा आएको छ ।
दशैंँअघि परीक्षण गरिएको केबुलकार आइतबार देखि व्यावसायिक रुपमै सञ्चालनमा आएको हो । केबलकार सञ्चालनमा आएपछि जिल्लाको कालीञ्चोक गाउँपालिकास्थित कुरी हुँदै कालीञ्चोक र कालीञ्चोक हुँदै कुरी आवतजावत गर्ने दर्शनार्थी र पर्यटकलाई सहज भएको छ ।
कालीञ्चोक दर्शन लिमिटेडले साँढे दुई वर्षअघि निर्माण शुरु गरेको कालीञ्चोक केबुलकार करीब रु ४५ करोडको लागतमा सम्पन्न भएकोे हो ।
प्रकाशित : शनिबार, कार्तिक १७, २०७५१४:४०
नमस्ते पीपीएल : चितवनलाई १ सय ४६ रनको विजयी लक्ष्य ! चितवनले केहीबेरमा ब्याटिङ थाल्ने
पेट्रोलियम पदार्थको फेरी मूल्यवृद्धि….
ज्यान मार्ने हिसावले खुकुरी र रड प्रहार गर्ने “ग्यांग” बिरुद्ध मुद्दा दायर !
किन छोडे त, जितुले जिरे खुर्सानी
निकिता चंडक र भावना घिमिरेसंगै जाने हैन त वाकथोन ?
विवाहको लगन सुरु भएसँगै बढ्यो सुनको मूल्य